» डिसेम्बरमा विवाह पक्का गरेका रणवीर र आलियाको विवाहको साइत किन सर्यो ?
डिसेम्बरमा विवाह पक्का गरेका रणवीर र आलियाको विवाहको साइत किन सर्यो ?
२४ कार्तिक २०७८, बुधबार १५:०२ प्रकाशित
एजेन्सी– बलिउडका कलाकारको जीवन समेत अचम्म कै छ। यहाँसम्म कि त्यहाँका चर्चित कलाकारलाई विवाह गर्ने फुर्सद समेत हुँदैन। यही डिसेम्बर महिनामा साइत जुराइएको रणवीर कपुर र आलिया भट्टको विवाह उनीहरूको व्यस्तताको कारण सन् २०२२ को अप्रिलका लागि सारिएको समाचार भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका छन्।
रणवीर कपुर र आलिया भट्टको विवाहको चर्चा लामो समयदेखि चलिरहेको छ । केही दिनअघि यी दुईले यसै वर्षको डिसेम्बरमा विवाह गर्ने खबर आएको थियो । त्यसपछि दुवैले २०२१ मा विवाह नगर्ने तर २०२२ मा मात्रै विवाह गर्ने खबर आयो । अब रणवीर र आलियाले आ–आफ्नो कामको प्रतिबद्धता पूरा गरेर अर्को वर्ष अप्रिल २०२२ मा विवाह गर्ने बताइएको छ।
हालै दीपावलीको अवसरमा आलिया र रणवीर आफ्नो आगामी फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’का निर्देशक अयान मुखर्जीसँग मुम्बईको काली पूजा पण्डलमा देखिएका थिए । रिपोर्टका अनुसार आलिया र रणवीरले कामको प्रतिबद्धताका कारण यही वर्ष हुन लागेको विवाह अर्को वर्षका लागि स्थगित गरेको बताइएको छ । यसैबिच, विक्की कौशल र कट्रिना कैफ डिसेम्बरमा विवाह गर्न लागेका छन्।
गत वर्ष दिएको एक अन्तर्वार्तामा रणवीर कपुरले कोरोना नआएको भए २०२० मा नै आलियासँग बिहे गर्ने बताएका थिए । उनले छिट्टै बिहेको मिति तय गर्न चाहेको बताएका थिए । पछि दुवैले डिसेम्बरमा विवाह गर्न सक्ने बताइएको थियो तर अहिले यो जोडीले अर्को वर्षको अप्रिलमा मात्रै विवाह गर्ने खबर आएको छ । समाचारमा जनाइए अनुसार दुवैले आ–आफ्नो आगामी प्रोजेक्टको सुटिङ सकेर सन् २०२० को अप्रिलमा विवाह गर्दै छन् ।
आलिया र रणवीर आगामी केही महिनादेखि आफ्नो आगामी प्रोजेक्ट र प्रमोसनमा व्यस्त छन् । आलियाको ‘गंगुबाई काठियावानी’, ‘आरआरआर’, ‘डार्लिङ्स’ र ‘रकी और रानी की प्रेम कहानी’ अर्को वर्ष रिलिज हुँदैछन् । उनी अहिले ‘रकी और रानी की प्रेम कहानी’ को सुटिङमा व्यस्त छन् । अर्कोतर्फ रणवीर कपूरको कुरा गर्ने हो भने उनको रोमान्टिक फिल्म ‘शमशेरा’, ‘एनिमल’ बाहेक लभ रञ्जनको निर्देशनमा रहेको ‘ब्रह्मास्त्र’ पनि रिलिज हुने भएको छ । दुवैको केही फिल्मको सुटिङ अलि बाँकी छ । आलिया र रणवीर पहिलो पटक ‘ब्रह्मास्त्र’ मा सँगै देखिने भएका छन् । उनीहरूले यी प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न र त्यसपछि शान्तिपूर्वक विवाह गर्न चाहन्छन्।
कपूर परिवार निकै ठूलो भएको र उनीहरु धूमधामका साथ बिहे गर्न चाहेको बताएको छ । अहिले उनीहरूको बंगला कृष्णराजको जीर्णोद्धारको काम चलिरहेको छ। साथै कोरोनाको डर पनि पुरै हटेको छैन। त्यसैले परिवार अझै केही समय लिन चाहन्छ । हालै यो जोडीलाई नीतु कपूरसँग निर्माण स्थलमा देखाइएको थियो। अब परिवारले आलिया(रणवीरको विवाहको अन्तिम मिति कहिले घोषणा गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।
रणवीर र आलिया ४ वर्षभन्दा लामो समयदेखि सम्बन्धमा छन् । दुवैको एकअर्काको परिवारसँग राम्रो बन्धन पनि छ। रणवीरकी आमा नीतु कपूर र रिद्धिमा कपूर साहनी आलियालाई धेरै मन पराउँछन् र प्रायः उनको बारेमा उनीहरूको सोशल मिडिया पोस्टहरूमा प्रेमको वर्षा गर्छन्। रणवीरले आलियाकी बहिनी शाहीन भट्ट र आमा सोनी राजदानसँग पनि चिलिङ गरिरहेको देखिन्छ।